Kooxda Jwxo-shiil, oo ka Cararaysa Kenya – Rasaasa News
Kooxda Jwxo-shiil, oo ka Cararaysa Kenya
Sep 14, 2011 Kooxda Jwxo-shiil, oo Cararaysa Kenya
Nairobi, Sep 14, 2011 [ras] – Maalmo ka dib kolkii uu Jwxo-shiil, soo saaray amaro uu kooxdiisa ugu sheegayo in ay ka baxaan Kenya, ayaa waxaa dalka Kenya ka bilowday qabqabasho ku socota xubnaha iyo taageerayaasha kooxda Jwxo-shiil.
War naga soo gaadhay dalka Kenya, ayaa waxaa uu sheegayaa in uu ka bilowday olole balaadhan oo ku socda kooxda Jwxo-shiil, ka dib kolkii ay dawlada Kenya xaqiiqsatay in degaanaan la,aanta iyo dilalka qarsoodiga ah ee ka socda dalka Kenya ay wado kooxda Jwxo-shiil.
Xubnaha kooxda ee ilaa shalay iyo maanta ay booliska Kenya ku xidheen magaalooyinka Nairobi iyo Garrissa ayey tiradoodu maraysaa 21 ruux.
Sida ay wararku sheegayaan xubnaha kooxda Jwxo-shiil, ayaa lug kaga baxsanaya magaalooyinka waaweyn ee Kenya iyaga oo u cararaya dhinaca xeryaha qaxootiga Dhadhaab.
Todoba  xubnood oo ka tirsan kooxda Jwxo-shiil, oo ay dhawaan qabteen booliska Kenya, ayaa xaqiijiyey in ay ka dambeeyaan dilalka qarsoon ee ka socda dalka Kenya. Waxayna sheegeen in ay si xoog leh u joogaan Kenya, taagerana ay ka helaan qaar ka mid ah dadweynaha gabalka NFD.
Dadka ay boolisku baadhida ku sameeyeen waxaa kale oo ay sheegeen, in kooxdu ay taageero balaadhan ka hesho xubno Somali ah oo ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya.
Booliska Kenya ayaa maxkamada u gudbiyey magacyo xubno ka mid ah dawlada Kenya si loogu fasaxo in Boolisku su,aalo waydiiyo.
Booliska Kenya ayaa imanaya guryaha iyo goobaha ganacsiga, iyaga oo dadka waydiinaya magacyada dad ka tirsan kooxda Jwxo-shiil iyo taageerayaasha kooxda.
Culimada iyo dhalinyarada gabalka waqooyi bari ee Kenya, ayaa dhawaan shirar ku qabtay magaalada Garrissa iyaga oo ku canaantay dawlada in ayna dan ka lahayn dhibaatada xoogaga shisheeye ee dalka ku sugan.
Dawlada Kenya ayaad moodaa in hada uun ay ku baraarugtay dhibaatooyinka dilalka iyo xasilooni darida ah ee kooxda Jwxo-shiil ay ka wado dalka Kenya gudhiiisa.
Kooxda Fanka Waayaha Cusub oo Wacdaro ka Dhigay Jijiga, Waxna u Sheegtay Jwxo-shiil
Gacan ku Dhiigle Jwxo-shiil, oo Dhagaro Horleh Bilaabay